Ciidanka Turkiga oo xiray Kutbettin Gülen, oo la dhashay Fethullah Gulen. – Radio Daljir
Ciidanka Turkiga oo xiray Kutbettin Gülen, oo la dhashay Fethullah Gulen.
Oktoobar 3, 2016 2:19 b 0
Izmir, Oct 03 2016–Ciidanka gaarka ah ee dowladda Turkiga ayaa xiray Kutbettin Gülen, oo la dhashay Wadaadka kunool dalka Mareykanka ee Fethullah Gulen, kaasi oo siweyn Turkiga looga raadinaayo.
Ninkaani ayaa waxaa ciidanku qabteen isaga oo kusugan magaaalada xeebta leh ee Izmir ee dalka Turkiga inkasta oo aysan faahfaahin ka bixin eedaymaha loohaysto iyo haddii lagu helay eedaymo ku aadayn afgembigii fashilmay ee July.
Ciidamada Turkiga ayaa sidan oo kale horey u xiray nin ilmo adeer yihiin Fethullah Gulen, waxaa sidoo kale Dowlada Turkiga xirtay qaarkoodna shaqada ka eriday dad badan ay ku eedeesay in ay taageersan yihiin Wadaadka maalqabeenka ah ee Fethullah Gulen.
DHEGEYSO-Warbixin kahadlaysa horumarka iyo ganacsiga magaalada Qardho.
DHEGEYSO-Midowga Yurub oo dardargelinaya mashaariicda ay ka wadaan Puntland.